တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တဲ့ကောင် — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းစက်မှာအကောင်တစ်ကောင်ကိုက်နေလို ့ကျွန်တော်လည်း သွားသတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလက်စွဲတော် CD bag လေးကိုသယ်ပြီးတော့ သွားတာ
အဲဒီအကောင်နဲ ့စတွေ ့တာပဲ အစကတော့အော်တစ်ခုမရတစ်ခုနဲ ့သေမှာပါပဲဆီုပြီး ကြည့်နေတာ
ရှိသမျှ antivirus တွေသာကုန်သွားတယ် အဲဒီအကောင်ကိုမတွေ ့ဘူးခင်ဗျ :O:O:O
အဲဒါနဲ ့ကျွန်တော်လည်း manually နဲ ့သတ်မယ် ဆိုပြီးတော့ စိတ်ကိုဒုံးဒုံးချပြီးတော့
super hidden file တွေ ရှာပါတယ် တွေ ့ပါတယ် အဲဒါနဲ ့unlocker ကိုသုံးပြီး delete လုပ်လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် မပျက်ဘူးခင်ဗျ ကျွန်တော်အံသြသွားတယ် :O:O:O
virus အတော်တော်များများက unlocker နဲ ့သုံးရင်ပျက်ရမှာကိုသူကမပျက်ဘူးခင်ဗျ
ဒါနဲ ့ကျွန်တော် cd bag ထဲမှာပါတယ့် deleting tools တွေသုံးပြီးတော့ဖျက်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒါပေမယ့် သူကဖြုံတောင်မဖြုံအဲဒါနဲ ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်လျော့ပြီး :106::106::106:
စက်ကိုသတ်လို ့မရရင်တောင် stick လေးကိုတော့သတ်လိုက်ပါဦးမယ် ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ယူလာပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ubuntu နဲ ့တက်ပြီး အဲဒီ stick ထဲက
အကောင်တွေကို delete လုပ်တာဗျာ လုံး၀သတ်လို ့မရဘူး ကျွန်တော်တော်တော်အံသြံသွားတယ်
file system မတူတော့တဲ့အခြေအနေရောက်တာတောင် အဲဒီ virus ကိုသတ်လို ့မရဘူးဗျာ (:((:(( နောက်ပြီးအဲဒီ virus ကတခြား virus တွေလို registry, task manager ဘာဆိုဘာမှမပိတ်ဘူးဗျာ အဲဒါကိုကျွန်တော်သတ်လို ့ကိုမရဘူး ကျွန်တော်ကိုကညံပါတယ်ဗျာ
သူကဓါတ်ပုံသမားဆိုတော့ နောက်ပြီး အဲဒီ virus ကလည်း ဓါတ်ပုံတွေပျက်ကုန်တယ်
တခြား file တွေရောပဲ ကျွန်တော်ကတော့ format မချစေချင်ဘူး :2::2::2:
MZ ကအကိုတို ့အမတို့format မချပဲသတ်လို ့ရတဲ့နည်းရှိရင်မစပါဦးဗျာ :77::77::77:
ဘယ်လို Infection ဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်လို Message တွေပြပါသလဲ? ဖြစ်နိုင်ရင် Screen Capture လေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပြောပြပေးလို့ရနိုင်မလား? ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ၀ိုင်းပြီး ဖြေရှင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့။
ဗိုင်းရပ်ကို လွယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ၊ သေချာထုတ်ပိုးပြီး တင်ပေးပါလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်ရတာပေါ့။ ဒါမျိုးဆိုလာထားပဲ ကိုကသာဘာမှမဟုတ်တာ ဟီး.... :d
တင်တော့တင်ချင်တယ်ဗျ တော်ကြာ database လေးတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြမှာစိုးလို ့
ရတယ်လေလင့်ကိုကုတ်လုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်မယ် ကိုရောင်ကြီးဆီပါကင်ထုတ်ပြီးပို ့ပေးလိုက်မယ်:D:D:D
အကောင်ကတော့ဒီမှာပါဗျာ မှားပြီးလို ့မနှိပ်မိအောင်ကုတ်ခံထားပါတယ်ဗျာ ကူညီကြပါခင်ဗျ :D:D
ကျွန်တော် အခုပဲ ဒေါင်းပြီး Kaspersky AntiVirus နဲ့Scan လုပ်ကြည့်တာ Detect တွေ ့ပြီး Delete လုပ်လို ့ရပါတယ် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Kapsersky AntiVirus တင်ထားပြီး Databases Up to Date ဖြစ်တဲ့စက်မှာ Virus ရှိတဲ့ Hard Disk ကို ချိတ်ပြီး Scan လုပ်ကြည့်ပါလား အဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်.:67:
ကျွန်တော်တော့ down ပြီး.. nod32 နဲ့ scan တယ်.. delete လို့ရတယ်..ဗျ..။ အကို virus ပါတဲ့ Headisk ကိုဖြုတ်ပြီး.. Kpsky ဖြစ်ဖြစ် nod 32 ဖြစ်ဖြစ် up to date ဖြစ်တဲ့ computer မှာ install ပြီး scan ကြည့်ရင်ရော.. အဆင်ပြေပါစေဗျား...:6:
အခု kasper နဲ့update လုပ်ပြီးသတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျ ဖြေကြားပေးတဲ့အကိုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် :6::6::6: